Hypnotix: fampiharana streaming IPTV miaraka amin'ny fanohanan'ny fahitalavitra mivantana sy maro hafa | Avy amin'ny Linux
Linux Post Install | 14/09/2021 06:00 | fampiharana, About us
Raha ny fampiasana ny solosaintsika amin'ny GNU / Linux na hafa rehetra Operating System miaraka amin'ny antony manosika ny fialam-boly, fialamboly na fialamboly mazàna isika dia miresaka momba ny mankafy lalao, mozika, horonan-tsary, ary amin'ny tranga hafa hatramin'ny TV, sarimihetsika ary andian-tserasera. Ary ho an'ity farany, misy tranokala maro ary koa misy fampiharana azo alaina, toa ny "Hypnotix".
"Hypnotix" Izany dia fampiharana natiora de Fitsinjarana GNU / Linux antso mint ampiasaina hiterahana TV, sarimihetsika ary andian-tserasera. Ary ny tsara indrindra, dia azo ampiasaina amin'ny hafa izy io Distros mitovy, azo na mifanentana miaraka amin'ny faharanitan-tsaina kely.
Megacubo: mpilalao IPTV marobe sy fiteny maro karazana
Ary satria mamoaka tsy tapaka momba ny rindranasa hafa mitovy na mifandraika amin'ny hetsika ankafizinay izahay TV, sarimihetsika ary andian-tserasera, hiala avy hatrany eto ambany ny sasany amin'ireo rohy farany indrindra amin'ny sasany aminay izahay Lahatsoratra mifandraika. Mba hahafahan'izay liana hijery azy ireo rehefa vita ity boky ity:
"MegaCube dia tetikasa loharano misokatra, azon'ny rehetra ampiasaina malalaka, tsy misy fomba fandoavam-bola. Ny tanjony dia ny manolotra traikefa tsotra, haingana sy azo ampiharina hijerena fahitalavitra an-tserasera ireo mpiserasera amin'ny Internet, hisorohana ireo olana fantatra atrehin'izy ireo rehefa manandrana mijery fahitalavitra amin'ny alàlan'ny browser. Ho fanampin'izay, tonga miaraka amin'ny azo ampitaina ho an'ny Windows (.exe) sy Linux (.AppImage / .tar.gz), ary miaraka amin'ny fanohanan'ny fiteny amin'ny Espaniôla, Anglisy, Portigey ary Italiana. Toy ny azo jerena sy sintonina avy amin'ny tranokalan'izy ireo GitHub." Megacubo: mpilalao IPTV marobe sy fiteny maro karazana
Kodi 18 «Leia» tonga miaraka amin'ny fanohanan'ny DRM, emulator ary maro hafa
1 Hypnotix: fampiharana Linux Mint teratany
1.1 Inona no atao hoe Hypnotix?
1.2 Ahoana ny fametrahana Hypnotix?
1.2.1 Ao amin'ny Linux Mint
1.2.2 Amin'ny Distros azo na mifanentana
1.4 Misy safidy hafa azo atao
Hypnotix: fampiharana Linux Mint teratany
Inona no atao hoe Hypnotix?
Araka ny anao fizarana ofisialy ao amin'ny tranonkala ofisialin'ny Linux Mint ao amin'ny GitHub, "Hypnotix" faritana fohifohy hoe:
"Mpilalao IPTV M3U."
Raha etsy ambany dia asiany antsipirihany izao manaraka izao:
"Hypnotix dia rindranasa streaming IPTV miaraka amin'ny fanohanan'ny fahitalavitra, sarimihetsika ary andian-tsary mivantana."
Ary ampian'izy ireo fa izany no izy mifanaraka amin'ny mpamatsy IPTV Inona no ampiasain'izy ireo:
Playlists eo an-toerana M3U
Ahoana ny fametrahana Hypnotix?
Ao amin'ny Linux Mint
Satria, a fampiharana Linux Mint teratany ho ampy fotsiny izany apetaho amin'ny sary amin'ny alàlan'ny Fivarotana lozisialy o Mpitantana fonosana sary. Na tsy mahomby izany, amin'ny alàlan'ny terminal (console) mihazakazaka izao manaraka izao baiko baiko:
Amin'ny Distros azo na mifanentana
Amin'ny hafa Distros mitovy, azo na mifanentana afaka manjary tena sarotra ataovy mahomby, noho ny olan'ny fiankinan-doha, tsy fisian'ny tranomboky ankoatry ny olana hafa amin'ny fametrahana azy na amin'ny asany. Izany hoe, ny tsotra fotsiny misintona ary apetraka ny installer .deb ao amin'ny toerana anaovanao izany dia tsy mahomby amin'ny ankamaroan'ny tranga.
Na izany aza, mizara ity fomba manaraka ity izahay izay nosedraina tamim-pahombiazana tamin'ny mahazatra Mamerina Linux antsoina hoe Fahagagana GNU / Linux, izay miorina amin'ny MX Linux 19 (Debian 10), ary izany dia natsangana taorian'ny ny «Torolàlana Snapshot MX Linux».
Mametraha toerana fitahirizana lolo: «kelebek333/mint-tools»
Fanavaozana ny lisitry ny fonosana
Ampio fanalahidy fitehirizana
Amboary loharano fitahirizana
Ary ovao ny teny manantitrantitra ny zaridaina na hafa mifanaraka amin'ny Distro anao amin'ny fisafidianana ireto manaraka ireto: Bionic, Focal, Groovy, Hirsute ary Impish.
Vaovao farany lisitra fonosana
Raha mandeha tsara ny zava-drehetra dia azonao atao ny mihazakazaka sy mampiasa tsy misy olana "Hypnotix" momba ny GNU / Linux Distro, araka ny hita amin'ireto sary manaraka ireto.
Handeha lalindalina kokoa amin'ny «Hypnotix» fametrahana tsindrio manaraka rohy. Ary hizaha ny sasany lisitra M3U maimaim-poana tsindrio manaraka rohy.
Raha fintinina, ny fampiharana Linux Mint teratany antso "Hypnotix" dia safidy mahaliana hijerena momba ny antsika GNU / Distros Linux rehefa mahita TV, Sarimihetsika ary andian-tantara an-tserasera amin'ny alàlan'ny Streaming IPTV mampiasa Lisitra M3U.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » Hypnotix: fampiharana streaming IPTV miaraka amin'ny fanohanan'ny fahitalavitra mivantana sy maro hafa
juanjosegarcia dia hoy izy:
Salama, manana fanohanana amin'ny chromecast izy ary azo atao, ohatra, raha manana sary mihetsika amin'ny solosaina finday aho, azoko atao ve ny mamindra azy amin'ny fahitalavitra miaraka amin'ny vlc ohatra?
Mamaly an'i juanjosegarcia
Miarahaba anao, Juanjosegarcia. Misaotra tamin'ny hevitrao. Na aiza na aiza no notadiaviko dia tsy hitako ny fanondroana an'io fampiasa io ao amin'ny Hypnotix. Ary satria ny Hypnotix dia mbola eo am-pivoarana tanteraka, tena azo atao ny manampy an'io fampiasa io sy ny hafa amin'ny fotoana rehetra. Izay mety ho tsara.
Zicoxy3 dia hoy izy:
Miasa tsara, na dia misy lisitra lehibe aza.
Tsy ampy tsy ampoizina izy io, motera fikarohana fantsona, afaka adala ianao….
Fanohanana tsara kokoa ho an'ireo fiteny amin'ny famokarana sy hanakanana ny «fihenam-bidy», satria raha mikasika ny kodiaran'ny totozy ianao dia manemotra ny famokarana…. ary rahoviana no mivantana ...
Mamaly an'i Zicoxy3
Miarahaba anao, Zycoxy3. Misaotra anao tamin'ny hevitrao, ary nilaza taminay ny zavatra niainanao sy ny tolo-kevitra momba izany fampiharana mahaliana sy mahasoa izany.
yt-dlp, fork an'ny youtube-dlc miaraka amina fanatsarana vitsivitsy